How to build employer-employee relationship? ﻿
How to build employer-employee relationship?
Tags: job work hot job career jobs in yangon job in myanmar good job jobless relationship
Though the type of employee and employer relationship that is considered appropriate varies from company to company, boundaries exist at almost all companies. Generally, it is unwise for employers to develop romantic relationships with their employees. Similarly, employers should exercise care to ensure that the relationship they develop with one employee isn't notably closer than the relationships they develop with others, as this can lead to concerns regarding favoritism or similar issues of unfairness within the workplace.
အလုပ်ရှင်နှင့် ၀န်ထမ်း ကြား ဆက်ဆံရေး ဘယ်လိုတည်ဆောက် မလဲ ?
အလုပ်ရှင် များသည် ၀န်ထမ်းအသစ်ခန့်ရာတွင် ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်ခန့်လိုက် သည် ပင်မဟုတ် relationship အသစ် တစ်ခုကိုပါစတင်လိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။ အလုပ်ရှင်နှင့် ၀န်ထမ်းကြား ဆက်သွယ်မှု သည် လည်း စီးပွားရေးတွင်အောင်မြင်နိုင်ရန် အတွက်အရေး ပါသည်။ ခိုင်မာသည့် ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်မှူများသည် လုပ်ငန်းခွင်တွင် productivity ကိုတိုးပွားစေသည်။
ဆက်ဆံရေးတစ်ခု၏ အခြေခံ အချက်များ
ယေဘုယျအားဖြင့် အလုပ်ရှင်နှင့် ၀န်ထမ်းဆက်ဆံမှုသည် လေးစားမှူရှိ ရမည်။ အချင်းချင်း ရင်းနှီးမှူ သည် လည်း အလုပ်ရှင်နှင့် ၀န်ထမ်းနှစ်ဖက် လုံးပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အချို.သော အလုပ်ရှင်များသည် ၀န်ထမ်း နှင့် ဆက်ဆံရာတွင် ခပ်စိမ်းစိမ်း ဆက်ဆံကြ သည်။ အချို့ကမူ မိတ်ဆွေရင်းများကဲ့သို့ဆက်ဆံကြသည်။ နှစ်မျိုးလုံးသည်မမှား သော် လည်းမမှန်ပါ။
အလုပ်ရှင် နှင့်ဝန်ထမ်းဆက်ဆံရေးသည် အပြန်အလှန် မှီခိုအားထားမှု ရှိရမည်ဖြစ်သည်။ အလုပ်ရှင်သည် လည်း ၀န်ထမ်းပေါ်တွင်မှီခို၍ သူ၏အလုပ်များ ကိုပြီးစီးအောင်ပြုလုပ်ရသည်။ ၀န်ထမ်းသည်လည်း အလုပ်ရှင်ထံတွင် မှီခို ၍ သူ၏ ကိုယ့်ကို ကိုယုံကြည်မှု ၊ မိသားစု အပေါ် ထောက်ပံ့ မှု များကို မှီခိုအားထားကြသည်။
အလုပ်ရှင်နှင့် ၀န်ထမ်းဆက်ဆံရေးသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ပိုမို တိုးတက်လာရမည် ဖြစ်သည်။ အလုပ်ရှင်သည်လည်း ၀န်ထမ်း၏ မိသားစုအကြောင်း ၊ ဘ၀အကြောင်းများမေး၍ သော်လည်းကောင်း ဆက်ဆံရေးကိုဆောင်ရွက်ရမည်။
အလုပ်ရှင် နှင့် အလုပ်သမား ဆက်ဆံရေးသည် Company တစ်ခု နှင့် တစ်ခု လိုက်၍ကွဲပြားမည်ဖြစ်သည်။ အလုပ်ရှင် နှင့်ဝန်ထမ်း ကြားသာမန်ထက်ပိုသော ဆက်ဆံမှူမျိုးမရှိသင့်ပေ။